युवालाई विदेश पठाउने सरकारले भारत र फिलिपिन्सबाट किन केही सिक्दैन | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
युवालाई विदेश पठाउने सरकारले भारत र फिलिपिन्सबाट किन केही सिक्दैन
मंसिर ८, २०७५ शनिबार १५:२५:४ | मेरो कथा मेरो भोगाई
विकास क्षेत्री अधिकारी/अर्जुनधारा, झापा, हाल युएई ।
म सन् २००३ देखि यतै छु । प्रायले जनचेतना जगाउपर्ने, भिजिट भिसामा आउँदा समस्या भएका, महिला कामदारका समस्या, लेबरहरुका समस्याका बारेमा परदेशमा भएकाहरुले लेखिरहनुहुन्छ । भनिरहनुहुन्छ । तर समस्याका कुरा मात्रै गरेर समाधान निकाल्न सकिँदैन ।
त्यसैले म चाहिँ यस्ता समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे आफूले बुझेका केही कुरा लेख्दैछु । सुरुमा दूतावासका कुरा गर्छु । युएईमा आएर समस्यामा परेका महिलाहरुका लागि दूतावासमा सेल्टर छ । तर यस्तो सेल्टर पुरुषहरुका लागि पनि हुनुपर्छ ।
किनकी युएईमा आउने नेपालीमा २० प्रतिशत महिला छन अनि बाँकी ८० प्रतिशत पुरुष । उनीहरु समस्यामा पर्दा यहाँ रहेका संघसंस्थाहरुले सहयोग गर्छन । हामीले धेरै पटक त व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग गरेका छौं । तर व्यक्तिगत रुपमा गरिने सहयोग कहिलेसम्म सम्भव होला र ।
केही समय अघि मैले चार जना साथीहरु मिलेर पैसा जम्मा गरेर जेलमा पु¥याएर, आउट पास जेलमा राखेर उहाँहरुलाई टिकट काटेर घर पठायौं । हामी कोही समस्यामा परेका छन भनेर दूतावासमा पुग्दा उहाँहरुले तपाईंहरुसँगै संघसंस्थाले सहयोग गर्नुप¥यो भन्नुहुन्छ । हुन पनि दूतावाससँग पनि सीमित स्रोत साधन छ ।
सीमित स्रोत साधनले के के पो गर्नु र । हामीले दूतावासका समस्या बुझेर सहयोग गरिरहेका छौं । आउँदा दिनमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को जनचेतनाका कुरो अथवा वैदेशिक रोजगारीमा आउने व्यक्तिलाई आउनुअघि दिइने जानकारी । हुन चाहिँ सबै कुरा छ ।
जाने देशको हावापानी, वातावरणदेखि प्राथमिक उपचार गर्न सिकाउनेसम्मका कुरा छन् । तर प्रभावकारी छैनन् । यसमा श्रम मन्त्रालयले विदेश जानुअघि कामदारलाई दिइने अभिमुखिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
यहाँका सामाजिक संघ संस्थाहरुले जनचेतना जगाउने काम यहाँ पनि कामदार बस्ने क्याम्पमै पुगेर गरिरहेका छौं । तर यसमा कामदारको सहभागिता चित्तबुझ्दो छैन । बिदाको दिन पारेर सचेतनाका कार्यक्रम गर्न क्याम्पमा पुग्दा कामदारहरु घुम्न गइसकेका हुन्छ । त्यसैले यसमा कामदारहरुले पनि आफ्नो समय निकाल्नुपर्छ ।
सचेतनाका कुरामा नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनकी कामदारलाई सचेतनाका लागि उनीहरुबाट पैसा लिइएको हुन्छ । तर पैसा तिर्दा पनि उनीहरुले चाहिने जति जानकारी पाइरहेका छैनन् ।
अर्को कुरा आकस्मिक कोष । दूतावासमा आकस्मिक कोष हुनुपर्ने हो । तर युएईमा रहेको नेपाली दूतावासमा यस्तो कोष छैन । कामदारबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएको हुन्छ आउने बेलामा ।
तर त्यो व्यक्ति यहाँ आएर अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भने उद्धार चाहिँ कि व्यक्तिले गर्नुपर्ने कि त संघसंस्थाले ? यस्तो स्थिती कहिलेसम्म ? यहीँ उदाहरण छ भारत र फिलिपिन्सको ।
अहिलेसम्म भारत र फिलिपिन्सका मान्छे समस्यामा पर्दा उनीहरुले व्यक्तिहरुबाट वा संस्थाहरुबाट पैसा उठाएको रेकर्ड छैन । उनीहरुले आफ्ना नागरिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्ने कोष बनाएका छन् । समस्या पर्दा त्यही कोषबाट उद्धार गरिन्छ ।
केही समयअघि एक जना भारतीयले आत्महत्या गर्न खोज्दा उसलाई बचाइयो । त्यो एउटा व्यक्तिको कुरामा भारतबाट सुस्मा स्वराजले फोन गरेर उसलाई किन त्यस्तो भयो भनेर सोधेपछि दूतावासले उसलाई उद्धार गर्‍यो ।
फिलिपिन्सको पनि त्यस्तै छ । कामदार नै पठाइरहेका यी देशले गरिरहेको कामबाट हाम्रो सरकारले किन सिक्न नसकेको ? हाम्रो देशको संयन्त्र सरकारी स्तरबाटै कमजोर छ ।
भएका संयन्त्रलाई अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन । अनि कमजोरी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले संयन्त्रहरुलाई जगैबाट बलियो बनाउनुपर्छ । भिजिट भिसामा आउँदा समस्या भयो भनिँदैछ ।
एउटा व्यक्तिले घुम्न पाउनु त उसको अधिकार हो नि हैन र ? त्यसलाई व्यवस्थित पो बनाउने हो त । आउनै नदिने भन्ने हो र ? त्यसैले समस्याका कुरा मात्रै नगरेर त्यसलाई समाधान गर्न भएका संयन्त्रलाई बलियो र चुस्त बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तुती : मोहन पौडेल
अन्तिम अपडेट: बैशाख ३१, २०७६
बच्चा अपहरण गर्न अाएकाे अाश‌ंकामा दुईजनाकाे हत्या
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, डा‍. भट्टराई भन्छन्, ‘सल्लाह त दिइयो आगे प्रमको जो मर्जी’
निर्माण व्यावसाय क्षेत्रको एकाधिकार तोडिन्छ : प्रचण्ड
जेठ २६, २०७५ शनिबार
गुडिरहेको जीपबाट हाम फाल्दा बैतडीमा एक जनाको ज्यान गयाे
जात्रै जात्राको कलाकारसहितको टोली विराटनगरमा
सरिताको हत्या आशंकामा पक्राउ परेका सबैलाई पुर्पक्षको लागि थुन...
नेकपा अध्यक्ष दाहालबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ
काठमाण्डौलगायत मध्य भेगमा आज बेलुका मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने ...
ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि निदाउँछु: हिरण्यलाल श्रेष्ठ
भारत जानेहरुका लागि एनसेलले ल्यायो ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा ...
विमलेन्द्र निधि कार्यवाहक सभापति
एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि
जेठ ९, २०७६ बिहिबार
भारतीय लाेकसभा चुनाव : बलिउड अभिनेता सन्नी देवलकाे जित
श्रमले उचित सम्मान र मूल्य नपाउँदा पुर्ख्याैली आरन व्यवसाय संकट...
गुठिचौर जग्गा विवाद प्रकरण: तीव्र रुपमा अनुसन्धान हुँदै
भारतमा बीजेपी 'राष्ट्रवाद'काे जित : नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्...
'कालीगण्डकीकाे पानी तिनाऊमा खसाल्न दिँदैनाैँ'
कहाँ फालिन्छ ब्रुमरले उठाएको 'टनका टन' धुलो ?
सन्दीप लामिछाने सीपीएलमा बार्बाडोसबाट खेल्ने
म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले युभेन्टस जाने सम्झाैता गरेकाे खुलासा